အောင်ရဲလင်း | Myanmar Movies | Myanmar VCDs | Myanmar Music | ShweO.com
Message from ShweO Thanks for visiting ShweO. We present more than 1200 Myanmar Movies plus hundreds of Asian Movies and Asian Drama. All The movies in our site can be instantly watched withaclick or two. If you want to tell us anything, please write to ShweOMedia@gmail.com. We will be very happy to hear from you and fulfill your needs.
ချစ်မယ်ဆိုတာချည်းပဲ အောင်ရဲလင်း ၊ ဝတ်မှုံရွှေရည် Myanmar Movies
ရင်ဘတ်ထဲက လိပ်ပြာ အောင်ရဲလင်း ၊ စိုးမြတ်သူဇာ ၊ ချောရတနာ Myanmar Movies
မောင်လေး အောင်ရဲလင်း ၊ မင်းဦး ၊ မိုးဟေကို ၊ ဝါဆိုမိုးဦး Myanmar Movies
အဆိပ်သင့် အချစ် ရန်အောင် ၊ အောင်ရဲလင်း ၊ ချစ်သုဝေ Myanmar Movies
ဟန်ဆောင်ကာ မူပို အောင်ရဲလင်း ၊ ဖွေးဖွေး ၊ ယွန်းရွှေရည် Myanmar Movies
လိုင်စင်ရ ဗီလိန် အောင်ရဲလင်း ၊ မိုးဟေကို Myanmar Movies
ကမ္ဘာဦးကတည်းက အချစ်ရှိသည် အောင်ရဲလင်း ၊ သက်မွန်မြင့် ၊ ချောရတနာ Myanmar Movies
ပြင်းပြင်းရှရှ ..ရသ အောင်ရဲလင်း ၊ သင်ဇာဝင့်ကျော် ၊ မေသက်ခိုင် ၊ အံ့မင်းညို ၊ ကျော်သူရ Myanmar Movies
နောက်ဆုံးဝိုင် အောင်ရဲလင်း ၊ စိုးမြတ်သူဇာ ၊ နန်းဆုရတီစိုး Myanmar Movies
၂၁ ရာစု စင်ဒရဲလား အောင်ရဲလင်း ၊ ဝတ်မှုံရွှေရည် ၊ ဖူးမြတ်သွယ် Myanmar Movies
Top Actors/Actresses:a- အောင်ရဲလင်းa - အေးဝတ်ရည်သောင်းa - အေးမြတ်သူb - ဗေလုဝc - ချစ်သုဝေc - ချောရတနာd - ဒွေးe - အိန္ဒြာကျော်ဇင် h - ထက်ထက်မိုးဦးh - ဟိန်းဝေယံ k - ခင်ဇာခြည်ကျော်k - ခန့်စည်သူ k - ခိုင်သင်းကြည်k - ခိုင်နှင်းဝေk - ခွန်းဆင့်နေခြည်k - ကောင်းခန့် k - ကျော်ရဲအောင်k - ကျော်သူk - ကျော်ဟိန်းk - ကျော်ကျော်ဗိုk - ကြည်လဲ့လဲ့ဦးl - လင်းဇာနည်ဇော်l - လူမင်း l - လွင်မိုးl - လှအဉ္ဖလီတင့်l - အယ်လ်ဆိုင်းဇီm - မင်းထက်ကျော်ဇင်m - မင်းရာဇာ m - မင်းသူm - မင်းဟိဏ်းm - မင်းအုပ်စိုးm - မင်းဦးm - မင်းမော်ကွန်း m - မယ်လိုဒီm - မိုးယုစံm - မိုးဟေကို m - မိုးဟေမာန်ခင်m - မိုးအောင်ရင်m - မိုးပြည့်ပြည့်မောင်m - မို့မို့မြင့်အောင်m - မျိုးသန္တာထွန်းm - မျိုးသီရိကျော်m - မေကဗျာm - မေသက်ခိုင်m - မေသန်းနုm - မောင်m - မြင့်မြတ်m - မြတ်ကေသီအောင်n - ညိုမင်းလွင်n - နဝရတ်n - နန္ဒn - နန္ဒာလှိုင်n - နေဆန်း n - နေတိုး n - နေထက်လင်းn - နေထူးနိုင်n - နေမင်းn - နေမျိုးအောင်n - နေယံn - နေရဲလင်းn - နိုင်းနိုင်း p - ပန်းဖြူp - ပပ၀င်းခင်p - ပုလဲဝင်းp - ပွင့်နဒီမောင်p - ဖိုးကျော်p - ဖူးစုံp - ပြေဇင်p - ပြေတီဦးp - ပြည့်ဖူးခိုင်p - ဖြိုးငွေစိုး s - ချစ်စနိုးဦးs - စည်သူမောင်s - စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်s - စိုးပြည့်သဇင်s - စိုးမြတ်သူဇာs - စိုးမြတ်နန္ဒာ s - စွမ်းs - ဆုပန်ထွာt - တင့်တင့်ထွန်းt - ထွန်းထွန်းt - ထွန်းအိန္ဒြာဗို t - သက်မွန်မြင့် t - သင်ဇာဝင့်ကျော်t - သဇင်t - သတ္တိt - သားညီt - သူထူးစံ w - ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း w - ဝေဠုကျော်w - ဝေဠုကျော်w - ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်းy - ရတနာခင်y - ရန်အောင် y - ရာဇာနေဝင်းy - ရီဝေယံy - ရဝေအောင်y - ရဲတိုက်y - ရဲအောင် z - ဇင်ဇင်ဇော်မြင့်z - ဇင်ဝိုင်းz - ဇာဂနာz - ဇာနည်z - ဇူးဇူးမောင်z - ဇေယျ
All Actors/Actresses:a- အရိုင်းa - အောင်ခိုင်a - အောင်ရဲလင်းa - အောင်စေa - အေးဝတ်ရည်သောင်းa - အေးအေးငြိမ်းa - အေးမြတ်သူb - ဘုန်းလျှံb - ဗေလုဝc - ချစ်သုဝေc - ချောရတနာd - ဒွေးe - အိအိငြိမ်းe - အိန္ဒြာကျော်ဇင် g - ဂန္တဝင်h - ထက်ထက်မိုးဦးh - ဟိန်းဝေယံ h - ဟေမာန်အောင်အောင်k - ခင်ဇာခြည်ကျော်k - ခင်ပပလှိုင်k - ခင်လှိုင်k - ခင်သန်းနုk - ခင်လေးနွယ်k - ခန့်စည်သူ k - ခိုင်သင်းကြည်k - ခိုင်နှင်းဝေk - ခိုင်ငြိမ်းငြိမ်းစံk - ခွန်းဆင့်နေခြည်k - ကောင်းခန့် k - ကျော်ရဲအောင်k - ကျော်သူk - ကျော်ဟိန်းk - ကျော်ကျော်ပိုင်k - ကျော်ကျော်ဗိုk - ကြည်လဲ့လဲ့ဦးk - ကြယ်စင်မိုးမိုးl - လင်းဇာနည်ဇော်l - လင်းလက်ဟိန်းl - လူမင်း l - လွင်မိုးl - လှအဉ္ဖလီတင့်l - လျှမ်းပြည့်l - အယ်လ်ဆိုင်းဇီm - မင်းထက်ကျော်ဇင်m - မင်းရာဇာ m - မင်းသစ္စာm - မင်းသူm - မင်းဟိဏ်းm - မင်းအုပ်စိုးm - မင်းအုပ်စိုးm - မင်းဦးm - မင်းမော်ကွန်း m - မယ်လိုဒီm - မိုးဒီm - မိုးယုစံm - မိုးဟေကို m - မိုးဟေမာန်ခင်m - မိုးအောင်ရင်m - မိုးပြည့်ပြည့်မောင်m - မို့မို့မြင့်အောင်m - မျိုးစန္ဒီကျော်m - မျိုးသန္တာထွန်းm - မျိုးသီရိကျော်m - မေကဗျာm - မေတ္တာm - မေထွဋ်ခေါင်m - မေနန်းခေါင်m - မေသက်ခိုင်m - မေသန်းနုm - မောင်m - မောစ့်m - မြင့်မြတ်m - မြမဉ္ဇူm - မြတ်ကေသီအောင်n - ညိုမင်းလွင်n - ညီသစ်ထူးn - ညွန့်ဝင်းn - နန်းဆုရတီစိုးn - နဝရတ်n - နန္ဒn - နန္ဒာလှိုင်n - နေဆန်း n - နေတိုး n - နေထက်လင်းn - နေထူးနိုင်n - နေဘုန်းn - နေမင်းn - နေမျိုးအောင်n - နေယံn - နေရဲလင်းn - နေလn - နေအောင်n - နိုင်းနိုင်း n - နှင်းဝတ်ရည်သောင်းo - ဥက္ကာမင်းမောင်p - ပန်းဖြူp - ပပ၀င်းခင်p - ပုလဲဝင်းp - ပွင့်နဒီမောင်p - ဖိုးသောကြာp - ဖိုးချစ်p - ဖိုးကျော်p - ဖူးစုံp - ပြေဇင်p - ပြေတီဦးp - ပြည့်ဖူးခိုင်p - ပြည့်စုံအောင်p - ပြည့်ဖူးခိုင်p - ဖြိုးငွေစိုး s - ချစ်စနိုးဦးs - စည်သူမောင်s - စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်s - စိုးရတနာs - စိုးပြည့်သဇင်s - စိုးမြတ်သူဇာs - စိုးမြတ်နန္ဒာ s - စွမ်းs - စန္ဒီမြင့်လွင်s - ဆုပန်ထွာs - ဆုလဲ့ရတီs - ဆုရွှန်းလဲ့s - ရှိုန်းယံs - လျှာညိုs - ဆောင်းနှင်းဝေt - တင့်တင့်ထွန်းt - ထိုက်တန်t - ထူးt - ထူးခန့်ကျော်t - ထွန်းထွန်းt - ထွန်းထွန်းဝင်းt - ထွန်းလွင်အောင်t - ထွန်းအိန္ဒြာဗို t - သက်ထားဦးt - သက်မွန်မြင့် t - သင်ဇာဝင့်ကျော်t - သဇင်t - သတ္တိt - သားညီt - သီတာချမ်းမြေ့t - သူထူးစံ w - ဝါဝါအောင်w - ဝိုင်းw - ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း w - ဝေဠုကျော်w - ဝေဠုကျော်w - ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်းy - ရတနာခင်y - ရတနာပုံy - ရတနာမိုင်y - ရန်ကျော်y - ရန်အောင် y - ရာဇာနေဝင်းy - ရီဝေယံy - ရဝေအောင်y - ရဲတိုက်y - ရဲထက်y - ရဲရင့်ထွေးy - ရဲအောင် z - ဇင်ဇင်ဇော်မြင့်z - ဇင်ဝိုင်းz - ဇာဂနာz - ဇာနည်z - ဇူးဇူးမောင်z - ဇွဲနိုင်ဝင်းz - ဇေယျz - ဇော်ဇော်အောင်
<!-- BEGIN SMOWTION TAG - 728x90 - shweo myanmar movies and vcds: entretenimiento - DO NOT MODIFY -->
<!-- END SMOWTION TAG - 728x90 - shweo myanmar movies and vcds: entretenimiento - DO NOT MODIFY -->